यामलालले अझै सिक्न नसकेको पाठ
आइतवार, जेठ ३०, २०७८
सत्तापक्षबाट खसेर प्रतिपक्षको सिटमा !
बुधवार, बैशाख २२, २०७८ कर्णालीखबर
काठमाडौँ : यदि कर्णालीको राजनीति चुपचाप चलिरहन्थ्यो भने यतिबेला मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा यामलाल कँडेल हुन्थे । अनि अहिलेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन्थे । एमाले एकल बहुमतका साथ सत्ता हाक्थ्यो ।
माओवादी, कांग्रेस लगायतका दलहरु विपक्षी बनेर सत्ताको र्याल काढ्थे । जनताको जनादेश अनुसार एमालेले सरकार मात्रै चलाउँदैनथ्यो । विगत तीन वर्षदेखि हुन नसकेका कामहरु पनि मुख्यमन्त्री बनेको खण्डमा यामलाल कँडेलले गर्न सक्थे ।
जस्तो कि कर्णालीका जनतालाई प्रदेश सरकारको महसुस राम्रोसँग हुन पाएको छैन् । अहिले केन्द्र सरकारकै धङधङीमा कर्णालीमा जनता बाचिरहेका छन् । शासनको अवस्था त्यस्तै छ । आधारभूत आवश्यकता सम्बोधनको अवस्था झन् त्यो भन्दा बढी दुराशयी छ ।
जे होस, कम्युनिष्टबाट कर्णालीमा जति सिकाई, गराई र नयाँ कुराको थालनी हुनुपथ्र्यो, कर्णाली बुझेको नेता भएका कारण यामलाल कँडेलबाट त्यो हुन सक्थ्यो ।
तर विडम्बना । मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद यामलाल कँडेलले सम्हाल्न सकेनन् । उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई सम्झाउन सकेनन् । बुझाउन सकेनन् । परिस्थिती अनुसार आफूलाई अपडेट राख्न सकेनन् । अझ भनौ राजनीतिमा जुन धोकाघडी हुन्छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नै सकेनन् ।
कर्णालीको राजनीतिलाई मोटामोटी विश्लेषण गर्दा यही भन्न कर लाग्छ । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न फेरि अभागी सावित भए । उनलाई समयले पत्याएन या आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मुख्यमन्त्री लायक देखेनन् । त्यो आगामी समयका घटनाक्रमले पनि निर्धारण गर्ला । तर यति भन्न सकिन्छ, यामलाल कँडेल राजनीति गर्न चुकेकै हुन् । परिस्थिती नुबझेकै हुन् ।
ओलीकै सिकायत गर्न खोज्दा...
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २०७० सालभन्दा अगाडिका भाषण सुन्नुभयो भने तपाईलाई प्रतिपक्षी नेताको निर्मम प्रहार थाहा हुन्छ । प्रतिपक्षी नेतामा अलिकति पनि दयाभाव हुदैन् । मनमा लागेको फ्याट्टै भन्छ् । भन्न बाँकी केही राख्दैन् । जे मन लाग्छ, त्यही बोल्छ ।
मानौँ यस्तो लाग्छ, उनीहरु सरकारको बदनाम गर्नै जन्मेका हुन् । आफ्नै पार्टीको सरकार होस वा अर्को पार्टीको । उनीहरुमा कुर्सीको भोक यति धेरै हुन्छ, आफ्नै दाजु भाईलाई पनि सत्ताच्युत गरेर सत्तारोहरण गर्न उनीहरु आतुर हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भएका बेला ओली भन्थे, यो सरकार खुट्टा टेक्न सक्दैन् । माथि समाउने हांगो छैन् । तै पनि सरकार चलाएको छ । बसेको छ । यस्तो सरकारको के काम ? खुरुक्क राजीनामा नदिएर के तमासा देखाइराख्या होला ?
ओली यस्तै बोल्थे । शब्द तलमाथि परेका हुन् । ओलीको बोली यस्तै निर्मम हुन्थ्यो । काठमाडौँमा त्यतिबेला ओलीको बोली सुन्नेहरु राष्ट्रवादी अडान भएको होइन, कमेडीयनले हसीमजाक गरेको बुझ्थे । ओली राष्ट्रवादी नेता बनेको त २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीपछि हो ।
त्यसअघि त उनी एमाले गुटको नेता थिए । चरी जस्ता गुण्डाहरुको संरक्षक मानिन्थे । पछि चरीको इन्काउन्टर भयो । ओलीले गुट बढाएर एमाले अध्यक्ष पद पड्काए । पार्टीमा शक्तिशाी बने । तर उनले सबै यो शक्ति र सत्ताको तालमेल मिलाएर गरेका थिए ।
ठीक यसैगरी तपाईले कर्णालीमा महेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यामलाल कँडेलका भाषण सुन्नुभयो भने ओलीकै शैली अनुग्रह भएजस्तो भान हुन्छ । उनी तिखा तिखा शब्द प्रहार गरेर माओवादी केन्द्रको सरकारलाई उडाउन बाँकी केही राख्दैन्थे ।
कर्णालीमा प्रतिपक्षी कांग्रेस बरु चुपचाप सुनिन्थ्यो । बजेटका बेला मात्रै उसले चर्को स्वर गथ्र्यो । बाँकी अरु बेला यामलाल कँडेल नै प्रतिपक्षी बनेर सरकारको खिल्ली उडाउँथे । यसर्थ उनलाई सत्ताका सदाबहार प्रतिपक्षी भनिन्थ्यो ।
माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा सत्ता चलाएका बेला यामलाल आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाएको रोष आफ्नो भाषणमा पोख्थे । जसरी ओली केन्द्रमा आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाएको झोक माधव नेपाल र झलनाथ खनालप्रति देखाउँथे ।
सत्तापक्षबाट खसेर प्रतिपक्षको सिटमा
राजनीतिमा धेरै चतुर हुँदाको परिणाम कहिलेकाँही आफैप्रति घातक हुन्छ भनेर यामलाल कँडेललाई हेरे पुग्छ । उनले मुख्यमन्त्रीका लागि के गरेनन् ? सरकारकाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएनन् कि ? आफै सत्तापक्षको नेता भएर प्रतिपक्षको नेताको जस्तो सेवा सुविधा लिएर सरकारको बदनाम गरेनन् कि ?
पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयासमा एकपटक नेकपामा हुँदै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएनन् कि ? त्यो अविश्वास प्रस्ताव तुहिएपछि उनले आफूलाई मिडियालाइज्ड गरेनन् कि ? उनले राजनीतिमा गर्नुपर्ने सबथोक गरे ।
सबथोक गर्दा पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न नसकेका बेला पार्टी टुक्रियो । एमाले र माओवादी चिरा पर्यो । सहजै उनको पोल्टामा सत्ता आउने अवस्था थियो । पहिले माओवादी केन्द्रको सरकार ढाल्न उनले समर्थन फिर्ता लिए ।
कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको नेताका हैसियतले उनले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै आफ्ना तीन जना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाए । माओवादी केन्द्रका नेताहरु अब सरकार ढल्ने भयो भनेर ढुक्क थिए । एमालेको सरकार बन्छ र यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्छन भनेर पनि उनीहरु ढुक्क देखिन्थे ।
तर सोचेजस्तो भएन् । यति गर्दा आफू स्वतः मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने भ्रम यामलाल कँडेलमा थियो । तर उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको मन जित्न सकेनन् । उनले गम्भीर रुपमा परामर्श पनि गरेको देखिएन् । होइन भने दलको बैठकले निर्णय गर्दा सरक्क राजीनामा गरेर फिर्ता हुने मन्त्रीहरु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न लाग्दा किन आत्मघाती भएर निस्किए ?
यो प्रश्नको उत्तर भेट्न मूश्किल छ । तर यति गर्दा पनि यामलाल कँडेलले पाठ सिक्न सकेनन् ।
२०७८ बैशाख ३ गते उनी मुख्यमन्त्री बन्न मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढाल्नुपर्ने दिन थियो । उल्टै एमालेकै नेताहरुले यामलालको सिट परिवर्तन गरेर सत्तापक्षबाट सोझै खसालेर प्रतिपक्षको सिटमा थन्क्याईदिए ।
यो सानो प्रहार होइन् । यो सानो षडयन्त्र होइन् । तर पनि यामलाल कडँेलले सुइको पाएनन् । पाएपनि उनले त्यसलाई रोक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । आफ्नो राजनीतिक कौशल देखाउन नसकेका उनी अहिले मनको भँडास पोख्न व्यस्त छन् ।
सत्तापक्षको सिटबाट प्रतिपक्ष सिटमा झरेको दिन नै उनले फ्लोर क्रस गर्ने नेतालाई भगौडा भने । राजनीतिमा कोही कहिल्यै भगौडा हुदैन् । आफूलाई दम्भ र घमण्डको पाठ सिकाउनेप्रति उनी यति निर्मम शब्द प्रहार गर्छन् ।
उल्टै मैदानमा उनी निरीह प्रतिपक्ष बन्नु परेको छ । तर आफूलाई हराउनेहरुलाई भगौडा भन्न व्यस्त छन् । यो कम्तीमा यामलाल कँडेल जस्ता नेता भनिने व्यक्तित्वहरुबाट आश गरिने राजनीतिक संस्कार होइन् ।
कर्णालीमा माओवादीको सरकार बनेपनि सही शासन र सही नेतृत्व बन्न सकेको छैन् । जनताको शासन महसुस हुन सकेको छैन् । यस्तो बेला कर्णाली बुझेका, राजनीति जानेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भएको खण्डमा केही न केही परिवर्तनको आभास हुन्थ्यो ।
तर उनी मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद गुम्दा पनि पाठ सिक्दैनन् । यो उनैका लागि राजनीतिक बेइमानी हो ।
यामलाललाई मुख्यमन्त्री बन्न फेरि पनि कठिन
प्रकाशित मिति: बुधवार, बैशाख २२, २०७८, ०८:३५:०९
पार्टी, माफिया र विचौलियामुखी बजेट नल्याउ
एमालेले बुझायो सरकारलाई १९ बुँदे मागपत्र
धरापमा कर्णाली प्रदेश सरकार, पूर्ण बहुमतमा एमाले
प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने
मुख्यमन्त्री नेपालीले शपथ लिएसँगै चार विना विभागीय मन्त्री नियुक्त
शनिवार, जेठ २९, २०७८ कर्णालीखबर
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शपथ लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले शपथ खुवाएकी हुन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजित नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा आजै नियुक्त गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिड –१९ विरुद्धको ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप उपलब्ध गराउन बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीसंग आज कुराकानी गर्दै उनले नेपालका ज्येष्ठ नागरिकले खोप अभावका कारणले दोस्रो मात्राको खोप लगाउन नपाएको कुरा उल्लेख गदै पत्र पठाइने बताए । पुरा पढ्नुहोस्
दैलेखमा बारीमै थन्कियो तरकारी आइतवार, जेठ ३०, २०७८
यी हुन् हुम्लामा बालकका लागि सहयोग जुटाउनेहरु
ज्ञानेन्द्र शाहीविरुद्ध सुर्खेत प्रहरी कार्यालयमा धर्ना
घाइते बालकलाई हुम्लाबाट सुर्खेत लगियो
डोल्मा फाउण्डेसनद्धारा कर्णालीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
१ ओली सरकारको मन्त्रीमा ध्रुव शाहीको नाम पनि चर्चामा
२ धरापमा कर्णाली प्रदेश सरकार, पूर्ण बहुमतमा एमाले
३ कर्णाली प्रदेशमा अपराधी पनि मन्त्री भए : कँडेल
४ म आलेको सपना [कविता]
५ संसदमा उठ्यो राउटे युवतीमाथिको दुर्व्यवहार घटना
रुकुममा नगरपालिकाद्धारा बाख्रा ठेकेदारलाई फिर्ता बिहिवार, पुष १७, २०२६
आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड बिहिवार, पुष १७, २०२६
माया नर्सिङ होमद्धारा पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री बिहिवार, पुष १७, २०२६
युरोकपमा इटालीको शानदार विजयी सुरुवात बिहिवार, पुष १७, २०२६
पोर्चुगलले इजरायललाई फराकिलो अन्तरले हरायो बिहिवार, पुष १७, २०२६
अर्जेन्टिना कोलम्बियासँग बराबरीमा रोकियो बिहिवार, पुष १७, २०२६
फेरि किन अस्पताल भर्ना भए मदनकृष्ण श्रेष्ठ ?
जयन्द्र रैगाईँको पहिलो गीत 'भाग्य'
मन लोभ्याउने हट बर्षा
बिष्णु बहादुर बि.क.